Wonke umuntu unalo icebo, kubalulekile amathuluzi engadini. Futhi ukubaluleka nobukhulu engadini ayinakho amathuluzi asebenza kuwo ayadingeka Kunoma yikuphi, ngisho noma kukhona ezihlukahlukene imishini ephambili. Kulokhu, amathuluzi ingadi ufeza umsebenzi asizayo noma okuyisisekelo salezo zimangaliso, lapho ukusetshenziswa imishini ngomshini engenakwenzeka. Wonke amathuluzi esandleni for engadini zingahlukaniswa zibe ezinkulu nezincane.
Eyokuqala ihlanganisa izimfoloko, namafosholo, ukucisha, trimmers, ezinkulu imithi yensimu ngokuthanda kwakho, abukhali. Isigaba sesibili sihlanganisa amageja ngocelemba, amasikela, imimese, baking powder, namafosholo, namasaha. Ukuze amathuluzi amaningana phiko kunalokho okunemibandela, isibonelo, Lopper, ungaba kokubili usayizi ezinkulu nezincane.
Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukisa ukusebenza amathuluzi engadini kungaba ngesandla kuphela kodwa futhi athutha, nge uphethiloli noma actuator kagesi.
Eyokuqala - ezinamandla, elula, kanti isixuku esikhulu awekho okhiqiza, kodwa engasindi futhi imvelo. Ethandwa kakhulu phakathi abalimi amathuluzi yesimanje, okuyiwona ayingxenye ebaluleke kakhulu amathuluzi engadini ngomshini kukhona trimmers, uphethiloli kanye Electrokos, kubalimi. Bona kakhulu lula umsebenzi sekukaningi.
Ingadi amathuluzi sihlanganisa eziningi amathuluzi kanye nemishini ukunisela. Lezi zihlanganisa kokubili ezivamile ukuthambisa amathini, amapayipi amanzi, amabhakede, sprayers, sprayers, futhi iphampa nezinhlobo ezahlukene drive. Uma kungekho ugesi kule ndawo, bese inkinga ukuzixazulula cottager esine ugesi encane yeselula ukuze Petrol noma diesel. Anamandla kumanele ugesi kanye ukukhanyisa. Sprayers kanye Imibhobho esemzimbeni, ngaphezu ukuhlinzeka izitshalo nge umswakama, asetshenziselwa ukulawula ezihlukahlukene izinambuzane. Ukuze wenze lokhu, esikhundleni amanzi, amakhemikhali izixazululo elisetshenziswa kubo.
Akumelwe sikhohlwe wensimu kanye ahlukahlukene sub-yokusungula. Ukuze wokugubha futhi inhlangano imibhede uzodinga ithephu futhi intambo ezivamile, ukudonsa-ukuqondisa. Ukuhlanza amanxeba phezu iziqu zezihlahla ngibatshale kuzosiza ummese ekhethekile. Okuxhumanisa amagatsha kudingeka izibopho, ucingo kanye impintshisi. Yingaleso elula ukuvuna, udinga ngokukhethekile aguqulelwe lokhu iziqukathi njongo.
Kakhulu ewusizo ongabheka kuyo ukuze eziningana imisebenzi ukusonga esihlalweni ezivamile, ikakhulukazi inqubo onzima futhi isikhathi eside. Ithuluzi esisemqoka wensimu kuyinto imoto, kubalulekile ukuthuthwa emhlabeni, umquba, isitshalo ukususwa kanye nodoti. Ukuqoqa apula, amapulamusi nezinye izitshalo izithelo ezikhulayo izihlahla noma nezihlahla ubude kudingeka iladi, ngakho ukusebenzisa isihlalo noma sezinyawo yingozi.
yokusungula ebhalwe ngenhla ngokusekelwe eBhayibhelini kuphela ihlanganisa izinhlobo ezinkulu amathuluzi engadini. Ngaphezu kwalokho, kuye ngokuthi isicelo kungase ahlukaniswe abe amaqembu amancane. Ngokwesibonelo, lokwela kungaba insabule, sovkovoj, wakhomba, uncamane nofana ayindulungu. Ukuze ithuluzi wakhonza isikhathi eside futhi njalo, udinga ukuhlela isitoreji amathuluzi engadini ngokukhethekile aguqulelwe izakhiwo injongo noma kwezakhiwo.
Indlela ukukhetha uphethiloli snowthrower: ukubuyekeza nezincomo abanikazi
Inyama yenkomo sikadali ngokuba umndeni dinner
Kuyini Chacha? Zingaki iziqu Chach? Recipe Chachi ngamagilebhisi ekhaya
Ukwaluka izinaliti zitshalwa. ingane onobuhle
Node Direct: ukunitha idayagramu. Indlela tie ifindo zamakhorali